Sarkaal Al-Shabaab u Qaabilsanaa Qaraxyada Oo Isku Dhiibay Federaalka. |
Sarkaal Al-Shabaab u Qaabilsanaa Qaraxyada Oo Isku Dhiibay Federaalka.
Sarkaale sare oo ka tirsanaa ururka Al-shabaab oo lagu magacaabo C/casiis Xasan Heybe (Bishaar) ayaa isku soo dhiibay Ciidamada federaalka Soomaaliyeed qeybta ku sugan Gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya, sida ay faafiisay wakaaladda Wararka ee Sonna
Taliyaha ururka 49-aad ee Guutada 9-aad ee Ciidamada Xoogga Soomaaliya oo ku sugan Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo Faarax Maxmed (Turbac) ayaa xaqiijiyay in horjoogahaasi ama sarkaalkaasi uu isku soo dhiibay ciidanka ku sugan Gobolka Gedo.
Mas’uuliyiin iyo saraakiil katirsan Dowladda Soomaaliya oo ku sugan Gobolka Gedo ayaa ku soo dhaweeyey Degmada Baardheere Sarkaalkaasi oo Shabaab u qaabilsanaa Qaraxyada iyo miinooyinka ay ka fuliyaan deegaano hoostaga Degmada Baraawe ee Shabeeladda Hoose balse isku dhiibay ciidamada Dowladda ee ka howlgala Gobolaka Gedo.
“Ninkan oo isku soo dhiibay ciidamada Xogga Dalka, wuxuu inoo sheegay in uu ka baxay Shabaab,islamarkaana uu ka soo laabtay fikradaha qaldan o ay aaminsan yihiin halkan ayuu joogaa,waxaan rajaynaynaa in kuwo kalena ay fahmi doonaan wadada saxda ah”, Ayuu yiri Taliye Turbac.
Sarkaalkan ayaa da’diisa lagu qayaasaya 25-30 jir,kaasi oo haatan gacanta ugu jira Ciidamada Xoogga Dalka gaar ahaan guutada 9-aad.
Saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsanaa Al-shabaab ayaa isku soo dhiibtay dowladda federaalka Tan iyo markii ay ku dhawaaqdey in ay cafis u fidinayso qofkasta oo ka soo baxa urur Shabaab,iyagoo u arka fursad ay ka faa’idaysan karaan.